Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အရွယ်များအား ထိုးနှံရန် အီးယူထောက်ခံအကြံပြု - Xinhua News Agency
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့ရှိ အီးယူရုံးချုပ် အပြင်ဘက်၌ လွှင့်ထူထားသော ဥရောပသမဂ္ဂအလံများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘရပ်ဆဲလ်၊ မေ ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဥရောပဆေးဝါးအေဂျင်စီ (EMA) က အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အရွယ်ရှိသူများအတွက် Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအသုံးပြုရန် မေ ၂၈ ရက်က ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
Pfizer/BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- BioNTech/Handout via Xinhua)
Pfizer-BioNTech သည် အဖွဲ့ဝင် ၂၇ နိုင်ငံပါဝင်သော ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) တွင် ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် ခွင့်ပြုပေးလိုက်သည့် ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးသည် ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် ကာကွယ်ဆေး ခွင့်ပြုရန် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ လက်ခံရရှိထားကြောင်း၊ အဆိုပါ အချက်အလက်များအရ ယင်းကာကွယ်ဆေးသည် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အလွန်ဆေးစွမ်းထက်မြက်ကြောင်း EMA ၏ ကာကွယ်ဆေးမဟာဗျူဟာ မန်နေဂျာ Marco Cavaleri က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်အား ဥရောပကော်မရှင်နှင့် သီးခြား အမျိုးသားအဆင့် ကြီးကြပ်သူများက အတည်ပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ထောက်ပြခဲ့သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ကြီးကြပ်သူများကမူ ၎င်းကာကွယ်ဆေးအား ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် အသုံးပြုရန် အကြံပြုထောက်ခံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
EMA ၏ ထောက်ခံအကြံပြုချက်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ဆယ်ကျော်သက် ၂,၂၀၀ ကျော်၌ စမ်းသပ်လေ့လာထားမှုအပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး လေ့လာမှုအရ ကာကွယ်ဆေးမှာ ဘေးကင်း၍ ထိရောက်မှုရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါ စမ်းသပ်မှု၌ ယင်းအုပ်စုများတွင် ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုအား အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၅ နှစ် အုပ်စုအတွင်း စမ်းသပ်မှုနှင့် ယှဉ်၍ရကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် ၎င်းကာကွယ်ဆေးသည် COVID-19 ကာကွယ်ရာတွင် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ထိရောက်မှုရှိကြောင်းလည်း လေ့လာမှုက ပြသထားကြောင်း EMA က ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် ၁၅ နှစ်ကြားကလေးများတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ အသက် ၁၆ နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူများတွင်ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ဆင်တူကြောင်း၊ အဆိုပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျင်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားနှင့် အရိုးအဆစ်များ နာကျင်ခြင်း၊ ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ဖျားနာခြင်းတို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
EU recommends Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for 12 to 15-year olds
Source: Xinhua| 2021-05-29 02:24:12|Editor: huaxia
BRUSSELS, May 28 (Xinhua) — The European Medicines Agency (EMA) on Friday approved the use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for children aged 12 to 15.
Marco Cavaleri, EMA’s vaccine strategy manager, toldapress conference that the medicines’ regulator had received the necessary data to authorize the vaccine for younger teens. The data shows that it is highly effective against COVID-19.
Regulators in Canada and the United States had already recommended its use for teenagers.
EMA’s recommendation was based onastudy in more than 2,200 adolescents in the United States showing that the vaccine was safe and effective. The trial showed that the immune response in this group was comparable to that in the 16-25 age group.
The study shows that the vaccine was 100 percent effective at preventing COVID-19, EMA said inastatement.
The most common side effects in children aged 12 to 15 are similar to those in people aged 16 and above. They include pain at the injection site, tiredness, headache, muscle and joint pain, chills and fever. ■
1- Flags of the European Union fly outside the EU headquarters in Brussels, Belgium, May 21, 2021. (Xinhua/Zheng Huansong)
2- Undated photo showsavial of Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine. (BioNTech/Handout via Xinhua)